Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0813 lah
Lesona 08 : Jesosy : Mpanome sy mpihazona ny zavatra rehetra
16 - 22 Feb 2013
Ilay "Mpihazona ny zavatra rehetra"
Alahady 17 Feb.
Ny tian-kambara eto dia ny mbola fihazonan'i Jesôsy hatrany ny fisian'izao rehetra izao amin'ny alalan'ny heriny. Tsy mahaleo tena ny tany manontolo, fa miankina amin'ny asa mitohy ataon'ny sitrapon'Andriamanitra ny fisiany. Toherin'ny 'déisme' izany - ny 'déisme,' izay foto-pisainana mampianatra fa noforonin'Andriamanitra izao rehetra izao ary navelany hampiodina ny tenany ka mamela azy hivoatra, nefa tsy mandray anjara amin'izany Izy. Toherin'ny Baiboly tanteraka ny fiheverana toy izany.
Tsy ao amin'ny zavaboary Andriamanitra, sady tsy mamorona azy miandalana eny foana, araka ny fiheveran'ny 'panthéisme' (ny fisainana fa zavatra mitovy ihany Andriamanitra sy [izao rehetra izao]), na ny 'panenthéisme' (mitoetra amin'izao rehetra izao Andriamanitra, toy ny hoe vatana mihitsy izany). Tsy miankina velively amin'izao rehetra izao Andriamanitra, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Miavaka amin'izao rehetra izao Izy. Efa nisy Izy ary mbola misy hatrany, nefa mahaleo tena amin'izao rehetra izao. Izao rehetra izao no miankina amin'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra no miankina amin'izao rehetra izao.
Vakio ny 1 Kôr. 8:6 sy ny Asa. 17:28. Fomba ahoana no amaritan'i Paoly ny fifandraisantsika amin'i Jesôsy?
Miankina tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra mahay mihazona antsika amin'ny fotoana rehetra, isan'andro isan'andro, isika. Noho ny fitiavana no mbola mampisy antsika sy mbola hahaizantsika mihetsika sy mamorona fifandraisana. Marina tokoa izany, indrindra ho an'ireo izay efa nanolotra ny tenany ho an'Andriamanitra, sy ireo izay "ao amin'i Kristy", araka ny voalazan'i Paoly (2 Kôr. 5:17; Efes. 2:10; mariho ny teny mifandraika amin'ny famoronana ao amin'ireo andininy ireo). Mbola marina ihany koa fa na ireo izay nandà ny famonjena aza, dia mbola miankina amin'ny herin'Andriamanitra izay mihazona ny fisiany. Nohazavain'i Daniela miharihary tamin'i Belsazara mpanjaka io hevitra io raha niteny izy hoe: "Fa Andriamanitra Izay mitana ny ainao sady Tompon'ny alehanao rehetra tsy mba nankalazainao" - Dan. 5:23.
Raha mbola ao an-tsaina ireo rehetra ireo, ahoana ny fahazoantsika ny fisian'ny sitrapo sy ny safidy malalaka? Nahoana no zava-dehibe loatra ny amin'izay rehetra inoantsika ireo zavatra momba ny fisiantsika ireo?